Baarlamaanka Ingiriiska oo ka doodaya aqoonsiga Somaliland | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Baarlamaanka Ingiriiska oo ka doodaya aqoonsiga Somaliland
Baarlamaanka Dowlada Ingiriiska ayaa maalinta berri ee 18 bishan Janaayo u balansan dood lagu niqaashi doono “aqoonsiga Somaliland”, oo uu baarlamaanka usoo gudbiyey xildhibaan Gavin Williamson.
Baarlamaanka Ingiriiska oo marar hore wax kasoo hadal qaaday qadiyada aqoonsiga Somaliland, ayaa mar kale berri toole wax iska waydiin doona arrintan.
Dhinaca kale Wasaarada Arrimaha Dibadda Somaliland, ayaa bogaadisay soojeedinta xildhibaan Williamson, qoraal lagu qoray boga Twitterka ee wasaarada, iyadoo sidookale baaq u dirtay dadka reer Somaliland ee ku dhaqan carriga Ingiriiska.
“Xukuumada Somaliland way ka war qabtaa dooda uu baarlamaanka UK ka yeelanayo aqoonsiga Somaliland 18 Janaayo, waxaanu ku boorinaynaa dadka reer Somaliland ee UK jooga in ay la xidhiidhan xildhibaannadooda, waanu u mahadcelinaynaa xogeeyihii hore ee difaaca Ingiriiska Gavin Williamson” ayaa lagu yidhi qoraalka.
Dhaq dhaqaaqa doodaha la xidhiidha aqoonsiga Somaliland ayaa marar kala duwan kusoo noqnoqday baarlamaanka UK, isla markaana dowladaha hoose ee magaalooyinka Sheffield, Cardiff iyo Birmingham ayaa horay u aqoonsaday madaxbannaanida Somaliland.
— MFA Somaliland (@somalilandmfa) January 16, 2022
Previous articleGuddiga Doorashada Jubbaland Oo Shaaciyay 13 Kursi Oo Ka Mid Ah Golaha Shacabka
Next articleMidowga Yurub oo walaac ka muijiyay mustaqbalka howlgallada ka dhanka ah burcad badeedda Soomaaliya